အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး(24 များအတွက်စုစုပေါင်း အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး ထုတ်ကုန်များ)
အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
လူပျိုစက် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
tag ကို: single-စက် Filter ကိုကောက်ခံရေး , PL လူပျိုစက် Bag Filter ကို , အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
PL တစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသေးစိတ်ကို: အဆိုပါ PL-တစ်ဦးကစီးရီးတစ်ခုတည်းအိတ် filter ကိုနိုင်ငံခြားအလားတူထုတ်ကုန်များအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းငယ်လေးတစ်အိတ် filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ခုတည်းအိတ် filter...
ဆီလီကွန် filter ကိုအိတ်နှင့်အတူသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်းခြင်းကေ့ , filter ကေ့အရိုး , အိတ်ကေ့အရိုး Filter
ဆီလီကွန်ဖုန်မှုန့် remover ၏မူဘောင်အားကြီးသောဂဟေချောမွေ့အသွင်အပြင်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရိုးစုဟာ filter ကိုအိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဆီလီကွန်အရိုးစု၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက် filter...
tag ကို: ဖုန်ကောက်ခံရေး၏နွေဦးလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ , multi ပူးတွဲလေ့လာကြရအောင်
စက်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်သွပ်ရည်စိမ်အိတ်လှောင်အိမ်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 15 -5/ Piece/Pieces
2000 Piece/Pieces USD5/ Piece/Pieces
min ။ အမိန့်: 500 Piece/Pieces
Air Clean Equipment Parts: Other
tag ကို: စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ , ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအိတ်ကေ့ , စက်မှု Bag ကေ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
filter လှောင်အိမ်ထုတ်လုပ် ကျနော်တို့ customers` လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်ရှုထောင်၏စစ်ထုတ်အိတ်များပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်စုံလင်သောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူထောက်ပံ့ရန်။...
Air ကို Filter ကိုအကြီးစား-တာဝန် Pneumatic ဘရိတ်ကြှေးမှေး
tag ကို: Powder ကြှေးမှေးများအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး Valve , စက်ရုံထောက်ပံ့ရေး Valve Air ကို Valve , အတောင့်နှင့်အမှုန့် Rotary Valve
(စစသည်တို့ကိုတင်းကျပ်ဘီးလမ်းခွဲ, ကြယ်ပွင့် type ကိုလမ်းခွဲ, လေတိုက်ကိရိယာ rotary လမ်းခွဲအဖြစ်လူသိများ) စတားအမျိုးအစားချကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတန်ဆာပလာအဖြစ်အဆောက်အအုံပစ္စည်းများ,...
electromagnetic filter ကိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Pulse Valve , 2.5 လက်မ Air ကိုကွန်ပ Solenoid Valve , သံမဏိ Solenoid Valve 220V ဆက်သွယ်ရေး
ဖွဲ့စည်းပုံ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် solenoid valve, အသေးစားအဆို့ရှင်ကိုယျခန်ဓာ, ကြီးမားတဲ့အဆို့ရှင်ကိုယျခန်ဓာ, အသေးစားမြှေး, နွေဦးနဲ့ကြီးမားတဲ့မြှေးပါဝင်ပါသည်, နှင့်အဆို့ရှင်ကိုယျခန်ဓာအလွိုင်းလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ...
လူပျိုစက် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆီလီကွန် filter ကိုအိတ်နှင့်အတူသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်သွပ်ရည်စိမ်အိတ်လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Air ကို Filter ကိုအကြီးစား-တာဝန် Pneumatic ဘရိတ်ကြှေးမှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
electromagnetic filter ကိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး from China, Need to find cheap အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our အထည်အိတ် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး, We'll reply you in fastest.
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနခြောက်သွေ့စက်များအတွက် pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ချွေတာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် PPS ဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ကတ္တရာစက်ရုံအိတ် filter ကိုဆုံလည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ